Eebbifamtoonni miira ida'amuutiin tarkaanfachuu qabu
Biyya keenyatti milkaa'inni gama babal'isa dhaabbilee barnootaa keessumaa yunivarsitootaatiin waggoota darbanitti galmaa'e daran olaanaadha jechuun ni danda'ama. Dhaabbileen barnoota olaanaa kunniin dheebuu humna nama baratee biyyattii bakkaan gahuu keessatti gumaacha irraa eegamu bahachaa jiru.
Dhaabbileen kunniin waggaa waggaadhaan humna nama baratee heddumminaan omishanii hawaasa biyyattii ogummaa leenji'aniin jaalalaafi haqaan akka tajaajilaniif imaanaa itti kennanii, kakuu galchiisisanii eebbisiisu.
Bara barnootaa xumuramaa jiru kanattis barattoonni kuma 170fi 578 yunivarsitiiwwan mootummaa 40 caalanirraa ni eebbifamu. Barattoonni eebbifamoon wayita hawaasatti makaman kana yaadrimee jaalalaafi ida'amaatiin badhaadhinaafi nageenya biyyasaaniitiif tattaafachuu akka qaban ni eegama.
Eebbifamtoota kanneen keessaa kumni 116fi 129 sagantaa idileetiin, kumni 54fi 450 ammoo sagantaalee al idileetiin barumsasaanii hordofaa kan turaniidha.
Eebbifamtoota kunniin keessaa 790n digrii sadaffaadhaan, kumni 21fi 581 digrii lammaffaadhaan, kumni 148fi 207 ammoo digrii jalqabaatiin kanneen eebbifamaniidha. Eebbifamtoota kanneen keessaa %32 dubartoota ta'uudha odeeffannoon Ministeera Barnootarraa argame kan ibsu.
Egaa eebbifamtoonni kunniin oggaa hawaasatti makaman barumsa barataniin carraa hojii uumameefi jiruttiifi uumamu keessatti hirmaachuun kan irraa eegamu yoo ta'u, tarkaanfii araaraa, jaalalaafi nageenyaa mootummaan fudhachaa jiru hordofuun biyyattii misoomsuun irraa eegama.
Keessumaa haala ammaan tana biyyattiin keessa jirtu sirnaan hubachuun daandii ida'amuufi jaalalaa Ministira Muummee Doktar Abiyyi Ahamad hordofuufi namooma biyya ogganuufi tajaajiluu nama dandeessisu gonfachuu qabu.
Kana maddiittis dargaggoonni dhaabbilee barnootaatii bahan hawaasaafi biyyasaanii misoomsuf beekumsa barnootaafi leenjiidhaan argataniin alatti jaalala biyyaa akka qabaataniifis fooyyessa barumsa lammummaafi amala gaariirraa kennuurratti qaama dhimmi ilaallatuun tattaaffii gochuun ni barbaachisa.
Hangasitti garuu eebbifamtoota baranaa bu'aa dadhabbiisaanii argachaa jiraniin baga gammaddan jechaa, isaanis qaama miira ida'amaafi jijjiramaa biyyattiitti mul'ataa jiru ta'uun ogummaa leenji'aniin jaalalaafi haqummaan lammiisaanii tajaajiluuf of qopheessuu qabu.
Torban kana/This_Week 4954
Guyyaa mara/All_Days 1642549